सशस्त्रमा आउँदैछ परिवर्तन ? – TajaNepal
Home /Blog/सशस्त्रमा आउँदैछ परिवर्तन ?
सशस्त्रमा आउँदैछ परिवर्तन ?
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी शैलेन्द्र खनालले कोषराज वन्तको च्यालन फेर्ने आँट के गरेका थिए हल्ला चल्यो । सस्त्रमा आमूल परिवर्तन हुने भो । उनले केन्द्रीय लेखाका दयाराम शर्माको ठाउँमा गणेश मल्ललाई ल्याएका छन् । होम ज्ञवालीको कानुनी विज्ञताको अर्थ भएन । ज्ञवाली निकै चलाख हुन् । उनी जो त्यसलाई टेर्दैनन् । त्यहाँ यिनको ग्याङ नै छ । यिनको म्यान पावरमा लगानी भएको बताइन्छ । आईजीपीका विश्वासी अर्थ, लेखा, प्रशासनमा हुनु ठूलो कुरा होइन । आर्थिक प्रशासन मशाखाबाट अभि खत्रीलाई आईजीपीले हटाउनु नौलो होइन । त्यहाँ कुलबहादुर नेम्वाङ आएका छन् । सशस्त्र प्रहरीको संगठन सुदृढ छ । तर समिा क्षेत्रमा यसको बढी बदनामी छ । आईजीपी खनाललाई त्यो थाहा छ । खनाल वरिष्ठताका नाताले आईजीपी भएका हुन् । उनले एआईजी नारायणबाबु थापालाई सशस्त्रको संगठन संरचना अध्ययन गर्न लगाएकाले प्रशासन मानव स्रोत जस्ता स्थानमा थापालाई ल्याउने तयारी भएको बताइन्छ । किनकि अर्ध सैनिक बल सशस्त्रमा नेतृत्वको निर्देशन र कमाण्ड माथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति हावी हुनु हुँदैन । अर्का आईजीपी पुष्पराम केसीले चलाखी गरेर नै हिजो बुढानिलकण्ठको साथ लिएका थिए । आईजीपी हुन यी कुदेकै हुन् । एमालेका नेता वामदेव गौतमको भिटो यिनको थियो तर केही लागेन । खनाल एक्ला दाबेदार थिए । सीमा सुरक्षा, भिआईपी सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षाको जिम्मा पाएको त्यो संगठन अहिले प्रदेश तहमा स्थापित हुन बाँकी छ । नेपाल प्रहरीको फोर्सभन्दा आधा संख्या कम भएको सशस्त्र हतियारले सुसज्जीत शक्ति हो । सीमा क्षेत्र बढी यसले हेर्नु पर्दछ । जहाँ नेपाल भारत सीमा तस्करहरूको बिगबिगी अहिले पनि उस्तै छ ।
डिआईजी को–को बन्लान्
आईजीपी खनालले एआईजीहरूको कार्यक्षेत्र तोक्ने काम थाती राखेर डिआईजीहरूको बढुवामा ध्यान दिएकोमा हलचोकमा खुसामत शुरु भएको छ । यस पटक डिआईजीका लागि ७ स्थान खाली छन् । तर आकांक्षी ११ जना रहेको स्रोत बताउँछ । प्रज्ञाभक्त, सञ्जय राणा, भरत श्रेष्ठ, रामप्रकाश श्रेष्ठ, राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेल, गोविन्द क्षेत्री, सीपी गौतम, हरिशंकर बुढाथोकी, कृष्णभक्त ब्रम्हाचार्य, राजेन्द्र बस्नेत प्रतिस्पर्धी हुन् । एसएसपी बन्दाको समय यिनीहरूको फरक छ । आईजीपी खनालले वरिष्ठतालाई कायम गर्ने संकेत दिएका छन् । सशस्त्रको डिआईजी बढुवामा २०७० को दुई लट र २०७१ को एकल लट रहेका छन् । प्राविधिक क्षमता कमजोर भएका शैक्षिक योग्यता नपुगेकाहरूको बाटो उनीहरूले नै छेक्ने स्थिति त्यहाँ छ । एसएसपीहरू डिआईजी हुँदा त्यो ठाउँमा एसपीहरूको बढुवाको रोल आउनेछ ।
आईजीपी खनालले सशस्त्रमा हिजो भ्रष्टाचार काण्ड लागेका अधिकृतहरू चिन्न सके भने आफ्नो कार्यकाल विवादरहित बनाउन सक्छन् । सशस्त्र बदनाम भएकै सीमा तस्करी र आन्तरिक मसलन्दमा हो । जहाँ ठेकेदारले सामान बुझाउनु अगावै भुक्तानी लिन्छ र कबोल भएको सामान पठाउँदैन । गुणस्तरहिन सामान सप्लाई गर्छ र नामतौल विभागसम्म सशस्त्रको खान्की पुग्छ । त्यसो त नेपाली सेनाले कालो सूचिमा राखेका ठेकेदारहरू पनि सशस्त्र प्रहरीमा मेजमानी खुवाएर ठेक्का हात पार्न सफल नभएका होइनन् ।